ရှေ့တန်း စခန်းတခုကို KIA က အစိုးရတပ်ထံမှ ပြန်လည် သိမ်းပိုက် | ဧရာဝတီ
ရှေ့တန်း စခန်းတခုကို KIA က အစိုးရတပ်ထံမှ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်
သန်းထိုက်ဦး| December 11, 2012 | Hits:334
11 | | ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်တန့်နေဆဲတွင် က ချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်နှင့် အစိုးရတပ်များ တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေသည် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
ကချင်ပြည်နယ် ချီဖွေမြို့နယ် ပန်ဝါဒေသတွင် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆုတ်ပေးခဲ့ရသည့် အရေးပါသော ရှေ့တန်းတပ် စခန်းတခုကို ယမန်နေ့က အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံမှ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လတွင် အစိုးရ ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၇၇ နှင့် ၇၄ တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က KIA တပ်ဖွဲ့ဝင် များထံမှ သိမ်းပိုက်ထားသည့် ရှေ့တန်းတပ်စခန်းကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေး မှူး ဦးလနန်က ပြောသည်။
“နေ့တိုင်း အဲဒီဘက်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မနေ့က မနက်မှာတော့ အဲဒီ စခန်းကို KIA က ပြန်ရလိုက်တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သိမ်းပိုက်ထားသည့် ယင်း တောင်ကုန်းတွင် KIA က အမြဲတမ်း တပ်စွဲရန် အထက်မှ ညွှန်ကြားချက် စောင့်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အဲဒီတောင်ကုန်းမှာ မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ နေရာယူထားတယ်ဆိုရင် ဒုက္ခသည်တွေ အပါအ၀င် ကျနော်တို့မှာရှိတဲ့ တခြား တပ်စခန်းတွေ အတွက်လည်း လုံခြုံမှု မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီစခန်းကို မဖြစ်မနေ ပြန်ယူရတယ်” ဟု ဦးလနန်က ဆက်ပြောသည်။
အစိုးရအနေနှင့် ယင်းတပ်စခန်းမှ တဆင့် KIA တပ် စခန်းများနှင့် ဒုက္ခသည် စခန်းတည်ရှိရာ အနီးအနားသို့ လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်ဖူးကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုလ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း ၁ ရက်မှ စတင်၍ ယမန်နေ့အထိ နှစ်ဖက်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲတွင် KIA ဘက်မှ ၄ ဦး ကျဆုံးပြီး ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရရှိပြီး အစိုးဘက်က အကျအဆုံး စာရင်းကို မသိရသေးကြောင်း KIA ဘက်က ပြောသည်။
စစ်ရေးအရ နှစ်ဖက်တပ်များ စစ်ရေးတင်းမားနေပြီး ယနေ့ အခြေအနေကို မသိရသော်လည်း အစိုးရတပ်က ရဟတ်ယာဉ်များကို အသုံးပြု၍ ရိက္ခာအပါအ၀င် စစ်တပ်အင်အား တိုးချဲ့နေကြောင်း သိရသည်။
ယင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် အစိုးရနှင့် KIO ခေါင်းဆောင်များ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် တည်ဆောက်ရန် အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်းလည်း ဦးလနန်က ရှင်းပြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးလှမောင်ရွှေက “ကျနော်နားလည်တာက KIO ဘက်က တောင်းဆိုတာက နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ်၊ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေ ရှင်းပြီးသွားရင် မလိုတော့ဘူး၊ သူတို့ပြောတာကိုလည်း ကျနော်က မှားတယ်လို့ မငြင်းလိုဘူး၊ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာဟာ ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတာ ကျနော်လည်း မသိဘူး။ အဲဒီကြားထဲမှာ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်နေမှာတော့ ကျနော် မလိုလားဘူး။ ဒါကိုတော့ မြန်မြန်လေ ပြီးသွားစေချင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အစိုးရနှင့် KIA ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ပြည်လည် တည်ဆောက်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ စတင်၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သော်လည်း သဘောတူညီချက် တစုံတရာ မရရှိသေးပေ။ သောင်းနှင့် ချီသော ဒေသခံများမှာလည်း အိုး အိမ်၊ တောင်ယာများကို စွန့်ခွာ၍ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများ၊ ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်ရာ ဒေသအနီးရှိ မြို့ပေါ်များနှင့် တောတောင်များထဲတွင် ထွက်ပြေး ခိုလှုံနေကြရဆဲ ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေသူများကို ကုလသမဂ္ဂ (UN) မှ အကူအညီပေးလို သော်လည်း မြန်မာအစိုးရက လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးသင့် ဒေသများသို့ ၀င်ရောက် အကူအညီပေးနိုင်ရန် မြန်မာ အစိုးရထံတွင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းထားကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဗယ်လာရီ အေးမို့စ်က ပြီးခဲ့သည့် သတင်းပတ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
IDPs များ ပြန်လည်နေရာချထားရေး နော်ဝေ ကူညီမည်
ချင်းမိုင်ရှိ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းကို ထိုင်းသိမ်းယူမည့် အရေး ကန့်ကွက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ပြန်ပို့လျှင် တရားမဝင် အလုပ်သမား ပိုများနိုင်ဟုဆို
4 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website mr.hlaing December 11, 2012 - 7:06 pm	good new!
Reply	ကိုအောင်စိုးလင်း December 11, 2012 - 7:42 pm	တော်တော်လေးကို ရက်စက်ကြပါလားနော်…။
Reply	ohnmar December 12, 2012 - 1:50 pm	တော်တော်တိုက်ချင်နေကြရင်လည်းပြည်သူတွေမရှိတဲ့နေရာမှာရှေးခေတ်တုံးကလိုစီး
Reply	Aung Khin December 16, 2012 - 11:34 pm	သုံပန်းအမိခံရ တိုက်ပွဲရှုံးရနဲ့ DSA, OTS ဆင်းတဲ့လူတွေ
ဗှူဟာမှုးတွေ တဖြေးဖြေး ဖျင်းလာတာ ပေါလွင်သွားပြီ ။
တပ်မတော်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မလုပ်ရင်
လုံးဝ ( လုံးဝ ) မရတာ သေချာသွားပါပြီ ။
ကစားချိန် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ကလေးအလုပ်သမား တွေ
ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး ILO ကူညီမည်
နိုင်ငံတကာကျောင်းမှာ ကလေးတို့ကို ကျောင်းထားမယ်ဆိုရင်
၁၃ နှစ်မလေး မအေးကောင်းနှင့် မအေးကောင်း များစွာ
အနာဂတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ အားကစားစိတ်